Fitantanam-pitondrana · Desambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Desambra, 2011
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Desambra, 2011
Ejipta: Filaharambe Amin'ny Fifidianana Ejiptiana Dingana Faharoan'ny
Fifidianana 30 Desambra 2011
Ny dingana faharoan'ny fifidianana parlemantera any Ejipta dia nanomboka androany (14/12/2011), miaraka amin'ny fandehanan'ireo Ejiptiana avy any amin'ireo faritany sivy ho any amin'ny biraom-pifidianana.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 16 Desambra 2011
Zambia: Miezaka mafy Hiady Amin'ny Kolikoly ny Mpiserasera
Afrika Mainty 08 Desambra 2011
Efa nisy fotoana nanakoako tao Zambia ny hiaka mitaky fanovana; ankehitriny ny antokon'i Michael Sata, Tia Tanindrazana (TT) no nandrava ny fahefana nanjaka ampolony taona, ny antoko Hetsika ho an'ny Demokrasian'ny Antoko-Maro (HDAM), hita fa mizotra mankany amin'ny lalam-baovao i Zambia. Ny hita ho tena mahaliana indrindra dia ny tanjona tokana kinendrin'ny governemanta...
Zambia : Nahatonga Resabe Ilay Fiara Raitra Vaovao An'ny Zanaky ny Filoha
Afrika Mainty 07 Desambra 2011
Ny ampamoaka nataon'ilay Tale mpanantanteraka ny Komitim-bahoaka Gregory Chifire izay nilaza fa ny zanaky ny Filoha Mulenga Sata dia vao nahazo fiara roa lafo vidy dia nahatonga fanehoan-kevitra nifamahofaho be teo amin'ireo mponina Zambiana.
Madagasikara: Adihevitra Momba ny Fampiasam-bola Mivantana
Afrika Mainty 06 Desambra 2011
Raha mbola eo ampitadiavana ny vahaolana ialana amin'ny krizy politika miitatra i Madagasikara, miresaka ny lanjan'ny Fampiasam-bola mivantana (FDI) kosa ny bilaogera malagasy. Maro ny Malagasy no mihevitra fa manana harena voajanahary, tahaka ny firenena Afrikana hafa, i Madagasikara, saingy potiky ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fifanakalozam-barotra misy fanambakana.
Afrika Mainty 05 Desambra 2011
Eoropa Afovoany & Atsinanana 03 Desambra 2011